Ngexesha elidlulileyo ndathetha kwinqaku malunga nendlela yokuyila iinkcazo-ntetho zokuprinta usebenzisa i-GIS eninzi. Ngelo xesha senze uyilo olusisiseko esihle, kule meko ndifuna ukubonisa enye entsonkothileyo. Lo ngumzekelo wemephu...
Le yenye yeemveliso ovuyayo ukuba uziphakamisile, kwaye ngomoya ezakhelwe wona, ngoku zenziwa zifumaneke kuluntu. Yincwadana ecacisa indlela yokuphumeza iNkqubo...
I-Google Earth, ngaphaya kokuba sisixhobo sokuzonwabisa ngokubanzi, iye yaba yinkxaso ebonakalayo kwi-cartography, zombini ukubonisa iziphumo kunye nokukhangela ukuba umsebenzi owenziweyo uhambelana; Intoni…
Ngexesha lokugqibela sithethe ngezinye iindlela zokuba kutheni i-MapServer kunye neziseko zofakelo. Ngoku makhe sibone enye yokusebenza kwayo kumsebenzi kunye neemephu zabahlobo baseChiapas. Apho inyuswe khona Nje ukuba iApache ifakiwe, i...
I-Alibre ligama lenkampani, igama layo linemvelaphi yegama lesiLatini elithi Liber, apho inkululeko, inkululeko, inkululeko, i-libero ivela khona; Ngamafutshane, imvakalelo yenkululeko. Kwaye kukuba injongo yale nkampani isekwe ekunikezeni…
Ukuthatha ithuba lencoko yamva nje kunye neziko leCadastre elalijonge ukuba lipapashe ntoni na iimephu zalo, apha ndishwankathela eyona nto ibalulekileyo ukubuyisela ukuhlangulwa komxholo kuluntu. Mhlawumbi ngelo xesha iya kukhonza umntu ofuna...
Inyanga enzima ngexesha, kodwa eyanelisayo kwimpumelelo kunye neminqweno yentsapho kunye nabantwana bam kunye nentombazana ekhanyisa amehlo am. Andikhange ndikwazi ukuthumela amaxesha ambalwa, nasi isishwankathelo esifutshane sefoto. Inkqubo...
Kwiintsuku ezimbalwa ezedlulileyo ndaqalisa uphuhliso kwi-NET Visual Basic ukusuka kwi-Microstation, apho ndinethemba lokusombulula umda we-Bentley Map, kunye noMlawuli wayo we-Geospatial. Ukwenza oku, ndibambe umfundi omdala esaqala naye ukwenza i-geosmoke...
Ngaphambi kokuba ndikuxelele ukuba ndiza kuphuhlisa uqeqesho ekusebenziseni i-ArcGIS 9.3, kunye nemodality ephakathi ngenxa yomgama, ixesha lam elincinci kunye nemisebenzi yabafundi. Ngoku ndikushiya nezigqibo ezithile: Malunga nendlela yokusebenza:...
Ndisandula kufumana isimemo sokuzimasa iBe Together, umsitho ophakamisa ulindelo olunika umdla kum, emva kokuba kubonakala ngathi imeko yezoqoqosho iyazinza kwaye amathuba kufuneka avuselelwe. Okona kulungileyo nge…
Ngaxa lithile, umfundisi wezobugcisa waseDatshi wandixelela esi sivakalisi: “Enyanisweni, iyandothusa into ethethwa yiManifold page. Yinto nje yokuba andizange ndiyibone isebenza kumatshini” Kule veki, uPatrick...
Lo ngumsebenzi kwiimeko ezilinganayo, ukulinganisa ixesha elithathayo ukuqalisa inkqubo ukusuka ngokucofa i icon kude kube ngumzuzu osebenzayo. Ngeenjongo zokuthelekisa, ndisebenzise leyo iqala...
Ukuqhuba uphando lwe-cadastral kunye nesikhululo esipheleleyo, ngaphandle kokuchaneka kwe-millimeter, kunokuba luncedo kwezinye iinjongo, ekubeni ukuphakama kwendawo nganye kufumaneka. Makhe sibone kule meko, indlela yokuvelisa amagophe amanqanaba, ...
Abo bethu bangabasebenzisi bezicelo zegraphic bahlala belindele izixhobo ukuba zibe nememori yokusebenza eyaneleyo. Koku, iinkqubo zeCAD/GIS bezisoloko zithandabuza okanye zilinganiswa ngokususela kwixesha elithathwayo ukwenza imisebenzi...
Ukuza kuthi ga ngoku yenye yeyona nto ilungileyo (ukuba ayilona ilungileyo) CAD/GIS ababukeli bedatha endiyibonileyo, isimahla kwaye iluncedo. I-Tatuk luluhlu lweemveliso ezazalelwa ePoland, kwiintsuku nje ezimbalwa ezidlulileyo inguqulelo yabhengezwa…